Munaasabadaha Muqdisho iyo Caqabadaha Dadweyne | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Munaasabadaha Muqdisho iyo Caqabadaha Dadweyne
Munaasabadaha Muqdisho iyo Caqabadaha Dadweyne
Muqdisho waxaa si maalinle ah kaga dhaca Munaasabado kala duwan oo ay qabato Dowladda Soomaaliyeed kuwaasi oo ka dhaca Hoteelada,Wasaaradaha iyo Goobo kale oo Magaalada ah waxaana ka qaybgala Madax kala duwan oo lagu casuumo munaasabadahaasi.
Dhanka kale waxaa jira wafuud heer caalami ah oo yimaadaan Magaaladani Muqdisho kadib casuumaad ay ka helaan Dowladda Soomaaliya,waxaase jirta in arimahaasi oo dhan ay caqabado kala kulmaan Bulshada ku dhaqan Magaalada Muqdisho kadib marka ay ciidamada Amaanka ay xiraan wadooyinka iyaga oo xaniba gaadiidka iyo isku socodka Dadweynaha taasi oo saamayn ku yaalato iku socodka Magaaladabulshadana kala kulmaan caqabado.
Munaasabadaha la xusi karo ee yeeshay saamaynta Dadka Muqdisho dareemaan waxaa ka mida,Booqashadii Madaxweyana Dalka Turkiga Rajib Dayib Ordugan,kulankii Igaad ee Muqdisho iyo munaasabdo kale oo si joogta ah kaga dhaca Magaalada.
Maalmaha Xuska qaran ee Dalku leeyahay Dadka kama maqlaan warbaahinta oo qura ee waxa ay ka dareemaan dhaq dhaqaaqooda Malainlaha ah ka dib marka ay la kulmaan wadooyin xiran isweydiin kadibna loo sheego waxa jira.
Dadka danyarta ah ee iyaga ka xamaasha wadada mashquulka badan ee Maka Al Mukarama ayaa iyaga la kulma dhibaatooyin u gaar ah oo laga yaabo in maalintaasi aysan suu helin waxa ay kula soo laabtaan guryahooda,waxaana sidoo kale isku cakirma gaadiikda Dadweynaha iyo sida gaarka ah loo leeyahay waxaana taasi keentaa in shaqaalaha iyo Ardayda asayn gaarin goobaha shaqo iyo tan waxbaarsho.
Dowladda Soomaaliya ayaa waajib ku tahay xaqiijinta amaanka Dalka waxaase sidoo kale muhiim ah in Dowladda Soomaaliyeed ee iska xilsaarto Dadka iyo daruufa jiraa si loo xaqiijiyo amaanka Dadlana loo sahlo arimahooda si loo hanto Dowladi waa Shacab.
Amaanka in lasugaa waa Muhiim waxaase Dowladda Soomalaiya looga fdhiyaa sidii ay u kala maarayn lahayd xaiijinta amaanka iyo isku socodka gaadiidka si Dadku ay meesha kaga saaraan waxaa xiran waddo waxa ay u xirantahay munaasabad hebla taasi oo Dadku aysan jeclaysan.
Maanta oo taariikhdu tahay 24 Feraayo waxaa duleedka Muqdisho Xarunta Ciidamada Asluubtakm7 ka jira Xuska Ciidanka Asluubta waxaana wadada ka xirantahay dhanka km13 ee duleedka Muqdisho waana mid ka mida caqabadaha Bulsho.
Previous articleCiidanka Asluubta oo u Dabbaaaldegay Sanadguuradoodii 45aad
Next articleDowladaha Soomaaliya iyo Turkiga oo ka wada Hadlay arimaha Labada Dal